လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူ ကိုညီညီမှ ဦးကိုကိုကြီးကို ဝေဖန် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူ ကိုညီညီမှ ဦးကိုကိုကြီးကို ဝေဖန်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ရက်နေ့က ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ငြိမ်းချမ်းမူ တည်ဆောက်ရေးကွန်ရက် (P.C.N) ကို ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့၊၂၀၁၃ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်ထောင်စူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ စွမ်းရည်တည်ဆောက်မူ (Capacity Building)၊ ပညာရေး နှင့်ဘ၀နေထိုင်မူ အဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဖွား အချင်းချင်း ချစ်ကြည် ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံမူများ တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်တူ အခြား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကွန်ရက်တွင် အတက်ပညာရှင်၊အသိပညာရှင်များ ၊IT ပညာရှင်များ စသည့်တို့က ညီညွှတ်ရေးကို ဦးတည်စေမည့် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို ရှေ့ရူမည့် သူတွေအားလုံးမှ ၎င်းငြိမ်းချမ်းမူ တည်ဆောက်ရေး ကွန်ရက်ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ လူမူစီးပွားရေး(Social Economy)၊ လူ့အခွင့်အရေး(Human Rights)၊သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး (Information and Media)၊ ပညာရေး(Education) စသည့် ခေါင်းစဉ်များ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အမြန်ဆုံးပြန်လည် ပြုပြင်ပေးရန်အတွက် တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြနေသည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး လှုပ်ရှားသူများ ကွန်ရက်မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုညီညီ (ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက် ၂၀၁၃)
Photo Credit => myanmarmuslim.net
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသူများထဲမှ ဒီမိုကရေစီအရေးတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်သော ကိုညီညီအား လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ M-Media မှ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
“၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီး အပါအ၀င် ဒီမိုကရက်သစ် အင်အားစု အချို့က ခေါင်းဆောင် အချို့က လူ့အခွင့်အရေး၊ အများစုအခွင့်အရေး၊ လူနည်းစု အခွင့်အရေး တော်တော်လေး အားနည်းတယ်။လူ့အခွင့်အရေးသာ မရှိဘူးဆိုရင် ဦးကိုကိုကြီး အပါအ၀င် ဘယ်သူမှ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ဖိနှိပ်မူ ယန္တရား အောက်မှာ လူ့အခွင့်အရေးကသာ အကာအကွယ် မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင် ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဦးကိုကိုကြီးဆိုတာ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာရှင် ယန္တရားအောက်မှာ ၀ါးမျိုခြင်းကို ခံရမှာ ဖြစ်တယ်”
“တစ်ကမ္ဘာလုံးက စံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ခေတ်မမှီတော့တဲ့ အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေး ၀ါဒကိုပဲ သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဦးကိုကိုကြီး အနေနဲ့ ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် ရာဇ၀တ်သားတွေနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်မှာပဲ”
“ရခိုင်အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးကိုကိုကြီးရဲ့ ရပ်တည်ချက်က ကျွန်တော်ကြားဖူးတဲ့ တရုတ် ပုံပြင်လို ဖြစ်နေပြီ။အဲဒီ ပုံပြင်လေးက တစ်ခါတုန်းက တရုတ်ပြည်မှာ ရှိတဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးက နဂါးကို အရမ်းချစ်တယ်။ဘုရင်ကြီး ပြောတဲ့ စကားတိုင်းမှာ နဂါးကို ဘယ်လို ချစ်တဲ့အကြောင်း၊ဘယ်လို တန်ဖိုးထားတဲ့ အကြောင်း၊နဂါးနဲ့ ပတ်သပ်တဲ့ ပုံတိုပတ်စ၊ကဗျာ၊လင်္ကာများကိုလည်း ရွတ်ဆိုလေ့ရှိတယ်။သူ့ ပန်းခြံထဲ၊သူ့အိမ်ထဲမှာလဲ နဂါးရုပ်၊ခန်းစီးလိုက်ကာ ကအစ နဂါးရုပ်တွေနဲ့ အလှဆင်ထားတယ်။တစ်နေ့ ဘုရင်ကြီးရဲ့ နန်းတော်ထဲကို တကယ့် နဂါးအစစ် တစ်ကောင် ၀င်လာတယ်။အဲဒီအခါကြတော့ သူ့ရဲ့ အိမ်ဖန်စောင့်တွေက “ငါတို့ ဘုရင်ကြီးက နဂါးကို အရမ်းချစ်တယ်၊သူက နဂါးနဲ့ ပတ်သပ်လာရင် အရမ်းတန်ဖိုးထားတယ်၊အဲဒါကြောင့် ငါတို့ ဘုရင်ကြီးဆီ နဂါးကို လွှတ်ပေးလိုက်မယ်”ဆိုပြီး လွှတ်ပေးလိုက်ကြတယ်။နဂါးက ဘုရင်ကြီး အိပ်ခန်းထဲကို ၀င်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ဘုရင်ကြီးက ဆောက်တည်ရာမယ့် ကြောက်လန့်တကြား အော်ဟစ်ပြီး ဒီနဂါးကြီးကို သတ်ပစ်ဖို့ အစောင့်တွေကို ခေါ်တယ်။ “ဘုရင်ကြီးက အရမ်းချစ်တယ်လို့ ခဏခဏပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ လွှတ်ပေးလိုက်တာပါ” လို့ပြန်လျှောက်တင်ကြတယ်။ ဘုရင်ကြီးက“ငါက အရုပ်ကိုပဲ ချစ်တာ၊တကယ့် အစစ်ကို ချစ်တာ မဟုတ်ဘူး၊အခု ချက်ချင်း သတ်ပစ်လို့ အမိန့်ပေးလိုက်တယ်”
“တစ်ချိန်တုန်းက လူ့အခွင့်အရေးကိုပဲ တန်ဖိုးထားကြောင်း တဖွဖွ ပြောခဲ့တဲ့ ဦးကိုကိုကြီးဟာ အခု လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပက်ပင်းတိုးတဲ့ အချိန်ကြတော့မှ လူ့အခွင့်အရေးက အရေးမကြီးတော့ဘူး အမျိုးသားရေး အမြင်နဲ့ တပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်းပြီး တိုက်ဖျက်ရမယ် ဆိုတော့ ဦးကိုကိုကြီးတို့ လူ့အခွင့်အရေးကို တန်ဖိုးထားတယ်၊ချစ်တယ် ဆိုတာ ပုံပြင်ထဲက ဘုရင်ကြီးလိုပါပဲလား လို့သတိရမိပါတယ်။ ဦးကိုကိုကြီးက ဒီမိုကရက်တစ်လား? နေရှင်နယ်လစ်လား? ဆိုတာလေး တစ်ခုပဲမေးချင်ပါတယ်” ဟု M-Media သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
This entry was posted on February 26, 2013, in ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ၈၈ ခေါင်းဆောင် ကိုမြအေး တို့အဖွဲ့နှင့် မန္တလေးမြို့ခံ မွတ်စလင်များ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း။
ကော်မရှင်သုတေသနအဖွဲ့ရိုပာင်ဂျာ တို့အား မမှန်မကန်လုပ်နေပာု စွပ်စွဲခံရ … →